MD-3010II မြေအောက်သတ္တု Detector China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:မြေအောက်ရွှေ Detector,နက်ရှိုင်းသောရှာရန်မြေအောက်ရွှေ Detector,မြေအောက်သတ္တု Detector Scanner
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြေအောက်သတ္တု Detector > မြေအောက်ရွှေ Detector > MD-3010II မြေအောက်သတ္တု Detector
ရွှေ Finder အဆင့်မြှင့် MD-3010II ဝါသနာ
MD-3010II LCD display မြေအောက်သတ္တု Detector ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြ၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အဓိကဆားကစ်အဖြစ်အဆင့်မြင့်ဂျပန်ဖူဂျီ 32CPU အလယ်ပိုင်း Processor ကိုအသုံးပြုဒစ်ဂျစ်တယ် detector တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက် LCD မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသထားသောသတ္တုအရာဝတ္ထုစေနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အမြန်တုံ့ပြန်ချက်၏အင်္ဂါရပ်များ, ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤသည်သတ္တု user ကလိုသတ္တုကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့မလိုချင်တဲ့ပစ်မှတ်ဖျက်သိမ်းရေးစေနိုင်သည်။ သငျသညျကိုတောင်းဆိုကြောင့်လည်းမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောပမာဏနှင့် sensitivity ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤသည်သတ္တု detector ကောင်းတစ်စစ်ရေးအသုံးပြုမှုအတွက် tool ကို, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေး, ရှေးဟောင်းသုတေသန, ဘဏ္ဍာကိုအမဲလိုက်, ကမ်းခြေထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအစွမ်းထက်နှင့်စွယ်စုံစက်ကိရိယာနှင့်, သင်ရုံဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့် ပတ်သက်. ဒင်္ဂါးပြား, ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, လက်ဝတ်ရတနာ, ရွှေ, ငွေအဘို့လိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ detector စွယ်စုံအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ထိုသို့အထူးသဖြင့်သဲကန္တာရထောက်လှမ်းအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်ဖို့အတှကျအဝါရောင်နှင့်အနက်ရောင်အရောင်ရှိပါတယ်။ ရွှေသတ္တု Detector, ရွှေသတ္တု detector, တရုတ်ဖန်ဆင်းရွှေသတ္တု detector ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကန္တာရထောက်လှမ်းခြင်း, စစ်ရေးအသုံးပြုမှု, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးရေး, ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ, ရတနာအမဲလိုက်ခြင်း, သဲသောင်ပြင်ထောက်လှမ်းခြင်း, နက်ရှိုင်းသောဒြပ်စင်တစ်မျိုး detector ။
1. အပြည့်အဝမှာ Automatic နှင့်အားလုံးသတ္တု detectors - သင် detector သတ္တုတ္ထုအမျိုးမျိုးတို့ကိုကို detect ။ သင် detect ချင်ကြပါဘူးတချို့တ္ထုများအတွက်ခန့်ထားပြီမဟုတ်လျှင်။
2. LCD ကို - အလင်းနှင့်အတူအဆိုပါ LCD ကိုပြုလုပ်ညဥ့်သို့မဟုတ် caliginous အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့သတ္တုကိုသိရှိနိုင်ဖို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
3. ပစ်မှတ်အထောက်အထား - အရှာဖွေတွေ့ရှိတ္ထုဟာ LCD display ကိုအပေါ်ပြသလျက်ရှိသည်။ ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့တ္ထုရကျိုးနပ်လျှင်သင်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
4. မလိုချင်တဲ့ပစ်မှတ်ပပျောက်ရေးနေ့ - သင်တချို့တ္ထုကိုတုံ့ပြန်ရန်မ detector သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ပစ်မှတ်များအတွက် 5. ထူးခြားသော Tone ကို - သင်ကပစ်မှတ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့သေံ generate မည်, object တစ်ခုတွေ့ရှိနေပါသည်သောအခါ, LCD display ကိုစောင့်ကြည့်ထားရန်မလိုပါ။ အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအလင်းလည်းမရှိတဲ့အခါသင်ကပင်ရှာဖွေပေမည်။ Long က Range သတ္တု Detector, နက်ရှိုင်းသောမြေပြင်သတ္တု detector, ရှည်လျားသောအကွာအဝေးသတ္တု detector ။
6. အဘယ်သူမျှမညံ့ဖျင်းသောလျှော့ Cable ကို - ကိုဝှကျထား (ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်နှင့်ရှာဖွေရေးကွိုင်အကြားဆက်သွယ်ထားသော) ရှာဖွေရေးကွိုင် cable ကို entangling နှင့်ပင်စည်အရှည်ညှိနှိုင်းမှု၏လွယ်ကူခြင်းအဘို့အရှောင်ကြဉ်ပါ။
နားကြပ်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်ထောက်ပံ့ပေး - 7. headphone jack ။ စတီရီယိုနှင့်မိုနိုနားကြပ်နှစ်ခုစလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
8. Volume ကိုထိန်းချုပ်ရေး - အသံကျယ်ပီသို့မဟုတ်နားကြပ်ဖို့ output ကိုအသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိပါ။
9. ဘက်ထရီအခြေအနေ Indicator သည် - ဘက်ထရီအခန်းအတွက်ဘက်ထရီများ၏အခြေအနေများပြသထားတယ်။
10. ရေစိုခံရှာရန်ကွိုင် - သင်ကရေတိမ်ပိုင်းရေအတွက် detector ကိုအသုံးပြုထားတယ်။
11. Adjustments ပင်မ - သင်အဆင်ပြေအသုံးပြုမှုအတွက် detector ရဲ့အရှည်ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ရှာဖွေရေးကွိုင်နှင့် controller ကိုယူနစ်ဆက်သွယ် micro-plug ကို၎င်း plug ကိုပိုမိုစိတ်ချစေသည်ပေးသောသတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
12. ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာ & ပင်စည် - လက်ဖျံပေါ်မှာ strain ပပျောက်ဖို့ဒီဇိုင်း။ နောက်ထပ်လက်မောင်းအားဖြင့် detector ကိုင်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်လက်အခန်းများ၏စလစ် secure ရန်နိုင်လွန် bracket က။
မြေအောက်ရွှေ Detector နက်ရှိုင်းသောရှာရန်မြေအောက်ရွှေ Detector မြေအောက်သတ္တု Detector Scanner မြေပြင်ရွှေ Detector မြေအောက်သတ္တု Detector မြေအောက်ရွှေ Scanner မြေအောက်သတ္တု detectors မြေအောက်ရတနာသတ္တု Detector